Tao anatin’ny telo volana: tafakatra 10 ireo matin’ny pesta | NewsMada
Tao anatin’ny telo volana: tafakatra 10 ireo matin’ny pesta
Nanomboka ny 1 aogositra hatramin’ny 26 oktobra teo, tafakatra 10 ireo olona matin’ny valanaretina pesta teto Madagasikara. Matin’ny pesta aretin-tratra ny enina ary matin’ny pesta atodintarina ny efatra. Miisa 37, hatreto, ny voamarina fa nisehoana trangana pesta tamin’ireo olona rehetra notilina. Fito amby roapolo ny velona, nanaraka fitsaboana ary tonga ara-potoana teny anivon’ny tobim-pahasalamana.
Mbola ahitana tranga voamarina fa pesta ny any amin’ny distrikan’i Befotaka, i Manandriana, i Tsiroanomandidy, i Midongy Atsimo, Anjozorobe, Ambositra ary i Moramanga.
Ho an’ny eto Antananarivo, mampatahotra ny mponina ny mety hisian’ny valanaretina pesta satria mitoby ny fako, tsentsina ny tatatra ary manjaka ny voalavo. Miakatra avy any an-tsaha ihany koa ny voalavo vokatry ny doro tanety.
Tamin’ny taon-dasa, nampiatoana mihitsy ny fampianarana ary tsy navela nivorivory ny olona sao mifamindra aretina. Nolazaina fa matin’ny aretina pesta ny ankamaroan’ny olona nodimandry nentina nampiakarana ny salanisan’ireo maty entina hanaporofoana amin’ny mpamatsy vola fa mila fanampiana sy vola ny fanjakana. Mbola tsaroan’ny mpanara-baovao izany, indrindra ireo fianakaviana nana-manjo sy noterena hanaiky fa matin’ny aretina pesta ny havany.